एक वर्षमा ५० अर्ब ७८ करोडको चामल आयात : RajdhaniDaily.com
Homeअर्थएक वर्षमा ५० अर्ब ७८ करोडको चामल आयात
काठमाडौँ । विहे ब्रतबन्ध लगायतका कार्य गर्दा देखासिकीकै लागि भएपनि सामान्य व्यक्तिले पनि ऋण गरेरै पार्टी प्यालेसमा भोज भतेर गर्ने संस्कार बढेको छ । होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसमा भोज भतेर गर्दा चामलको माग बढ्छ । तर, पछिल्लो २ वर्ष यता विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीले होटेल रेष्टुरेन्ट पार्टी प्यालेस नै सञ्चालन हुन नसकेर ठप्प छन् । तर, पनि यो वर्ष चामलको आयात अत्याधिक रुपमा बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा चामलको आयात ५० अर्ब ७८ करोड ७२ लाख ७२ हजार रुपैयाँको १ अर्ब ३३ करोड ४३ लाख ३६ हजार ४४६ केजी चामल आयात भएको छ ।
विभागले सार्वजिनक गरेको तथ्यांक अनुसार यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो । अघिल्लो वर्ष ३३ अर्ब ६५ करोड १४ लाख २९ हजार मुल्य बराबारको ४४ करोड ८४ लाख ४२ हजार ५१३ केजी चामल आयात भएको थियो ।
कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशमा रहेको देशमा वर्सेनी चामलको आयात अत्याधिक रुपमा बढ्नु देशकै लागि लजास्पद मानिन्छ । पूर्व आपूर्ति सचिव तथा व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, ‘कुनै पनि वस्तुको बजारमा माग बढी हुँदा उत्पादन कम भएपछि आयात बढ्नु स्वभाविक हो । तर कृषिप्रधान मुलुकमा कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत कृषि पेशामा संग्लन भएको देशमा एक वर्षमा ५० अर्बको चामल हुनु देशका लागि लज्जाको विषय हो ।
कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरी देशलाई आर्थिक समृद्धि बनाउने नारा, नीति र योजना मात्र बनाएर देश आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने उनको भनाई छ । ‘नेपालमा स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरी निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने र कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धि बनाउन सकिने आधार धेरै छन । तर बनाएका नीति तथा योजनाहरु कार्यान्वयन नगरी कागजमा सिमीत राख्ने कारणले नेपालमा वर्सेनी आयात बढ्दो छ ।’
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गरी उत्पादन बृद्धि गर्ने भनिए पनि सरकारले कृषिलाई प्रथाकितामा नै नराखेको उनको भनाई छ । पूर्व आपूर्ति सचिव ओझाले भने,‘सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मभिर्नर गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परियोजना सञ्चालन गरेको ५ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, परियोजनाको उद्देश्य अनुसार कृषिमा आत्मानिर्भर हुन सकेको छैन ।’
सरकारले किसानलाई दिने गरेको कृषि अनुदान समेत सहि कृषकको हातमा पुग्न नसक्नु र आवश्यता अनुसार कृषि क्षेत्रमा लगानी नबढेकाले पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्न नेपालमा कृषिमा ठुलो लगानीको गर्नुपर्ने उनी बताउछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले नेपालीहरुमा खाने बानीमा आएको परिवर्तनले नै पछिल्लो समय चामल आयात बढ्दै गएको बताउछन् । चामलको आयात बढ्नुको एउटा कारण चामललाई जाँड रक्सीमा बढी प्रयोग गर्नु र पशु दानामा पनि प्रयोग गर्ने भएकाले बढेको हुन सक्ने डा. घिमिरेको भनाई छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार चामलको आयात अत्याधिक बढेको छ । उनले भने,‘तर त्यो तथ्यांक अनुसारको सबै चामल नै हो कि होइन भन्ने पनि शंकाको विषय भएको भएको उनको भनाई छ । चामलमा भन्सार शूल्क कम लाग्ने हुँदा व्यापारीले भन्सार शुल्क छल्न चामलको सट्टा अन्य वस्तु ल्याएको हुन सक्ने उनले बताए ।
नेपालमा आयात निर्यातको वास्तविक तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नहुँदा तथ्यांकमा पनि समस्या हुनसक्ने उनको बुझाई छ । ‘खुल्ला सिमाना भएकाले आउने र जाने दुबै हुन्छ । तर नेपालबाट भारत गएको हामीसँग कुनै तथ्यांक छैन ।’ घिमिरेले भने । तथ्यांक नहुँदा गएको नदेखिने आएको मात्र देखिएको भएकाले नेपालमा उत्पादन नै भएको छैन कि भन्ने देखिएको उनको भनाई छ ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले थप १० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याएको छ । सदस्यता छानविन समितिले काठमाडौंसहित १० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद मंगलबार...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा विरोध गरिरहने जनाएका छन् । आफूहरूको मागबारे छलफल नै...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक–२०७८ पारित भएको छ । आइतबार बसेको नवौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकले आन्तरिक आयका लागि राजस्वका शीर्षक र प्रस्तावित राजस्वका...
चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याइयो, के के छन् ?
लाङटाङ निकुञ्ज मुद्धाकाे सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासमा
निराजन पौडेल - September 13, 2021
टेनिस रोका - September 10, 2021